हामी सबै किन बन्नुपर्छ नारीवादी ?
चिमामान्डा अदिची शनिवार, असार ३१, २०७४ 5501 पटक पढिएको
म १४ वर्षकी थिएँ । हामी उसकै घरमा आधाअधुरो किताबी ज्ञानको आधारमा विभिन्न विषयमा अनेक तर्क गर्दै थियौं । के विषयमा तर्क गरिरहेथ्यौं, अहिले ठ्याक्कै सम्झना छैन । तर, के सम्झना छ भने मैले पटकपटक तर्क गरेको गर्‍यै गरेँ । ओकोलोमाले मलाई हेर्‍यो र भन्यो, 'तिमीलाई थाहा छ, तिमी नारीवादी हौ ।'
यो कुनै गुनासो थिएन । म उसको बोल्ने तरिकाबाट महसुस गर्न सक्थेँ उसले ठ्याक्कै त्यस्तै तरिकाले भनिरहेको थियो मानौं कसैले भनेको छ, 'तिमी आतंकवादीको समर्थक हौ ।'
मलाई त्यस बेला नारीवादीको अर्थ थाहा थिएन । मलाई थाहा नभएको उसलाई थाहा नहोस् भनेर मैले त्यो प्रसंग नै पन्छाइदिएँ । हामी फेरि तर्कवितर्क गर्न थाल्यौं । घर पुग्नासाथ मैले शब्दकोश पल्टाएर नारीवादी भन्ने शब्दको अर्थ हेरेँ ।
अब कथालाई अलि दौडाऊँ ।
म प्रायःजसो मलाई ठीक लागेको अरू सबैलाई पनि त्यत्तिकै ठीक लाग्छ भन्ठान्ने गल्ती गर्छु । उदाहरणका लागि मेरो अर्को प्रिय साथी लुईको चर्चा गरौं । लुई मलाई भन्ने गथ्र्यो, 'मलाई थाहा छैन किन तिमी महिला हुनु पुरुष हुनुभन्दा धेरै फरक र गाह्रो हो भन्ने गर्छौ । त्यस्तो पहिलेको जमानामा हुन्थ्यो होला, तर अहिले त हुँदैन नि ।' मैले भनेँ कहिल्यै बुझ्न सकिनँ, छर्लंग र स्पष्ट पनि लुई किन देख्दैन ?
नाइजेरिया आएको बेला एक साँझ लुई र म रमाइलो गर्न साथीहरूसँग लेगोस गएका थियौं । लेगोसमा हामीलाई पार्किङ गर्ने स्थान मिलाइदिने मानिसलाई मैले टिप्सस्वरूप आफ्नो पर्सबाट आफूले कमाएर राखेको पैसा झिकेँ र उसलाई दिएँ । प्रसन्न भएको त्यो मानिसले लुईतिर हेर्‍यो र भन्यो ­, 'धन्यवाद सर !' उसको यो हर्कतले लुई अचम्ममा पर्‍यो र मलाई सोध्यो ­, 'उसले मलाई किन धन्यवाद भनेको ? मैले त उसलाई पैसै दिएको छैन ।' त्यसपछि मात्र लुईले मेरो भनाइ बुझ्यो । त्यो पैसा लिने व्यक्तिले मसँग भएको पैसा लुईबाटै आएको हो भन्ने सोचेर नै उसलाई धन्यवाद दिएको थियो किनकि म महिला थिएँ र लुई पुरुष ।
यो भन्दा पनि गलत तरिकाले हामी छोरीहरूलाई हुर्काउछौं । उनीहरूलाई केटाहरूको अहंको सम्बोधन गर्न सिकाउँछौ । छोरीहरूलाई आफैंले आफूलाई होच्याउन सिकाउँछौं, सानो बन्न सिकाउँछौं । हामी उनीहरूलाई महत्वाकांक्षा त राख तर धेरै नराख भन्छौं । सिकाउँछौं सफल हुने उद्देश्य राख, तर धेरै सफल हुने होइन किनकि यसले पुरुषहरूलाई चुनौती दिन्छ । परिवारको कमाउने मानिस तिमी नै हो भने पनि समाजको अगाडि त्यस्तो नदेखाऊ । तिमी नै कमाउने मानिस हो भन्दा तिम्रो लोग्ने कमजोर हुन्छ ।
आखिर किन एक महिलाको सफलता पुरुषका लागि चुनौती बन्छ ?
हामी छोराको गर्लफ्रेन्ड थाहा पाउँदा केही आपत्ति जनाउदैनौं । तर, छोरीको ब्वाइफ्रेन्ड ! राम ! राम ! अनि समय आएपछि हामी त्यही छोरीले एउटा पर्फेक्ट पाओस् भन्ने कामना गर्छौं ।
हालसालै नाइजेरियाको विश्वविद्यालयमा एउटी युवती सामूहिक रूपमा बलात्कृत भएकी थिइन् । त्यसमा धेरै नाइजेरियाली युवकयुवतीको प्रतिक्रिया यस्तो थियो ­, 'हो, बलात्कार ठीक होइन । तर, चारजना केटा भएको कोठामा एक्ली केटी के गरिरहेकी थिई ? ' हामीले एकैछिनका लागि यस प्रतिविक्रयाको घोर अमानुषिकतालाई बिर्सिएर हेर्‍यौं भने यी नाइजेरियालीहरूले सानैदेखि महिलाहरू आन्तरिक रूपमै दोषी हुन्छन् भन्ने सिकेका छन् । पुरुषबाट केही आशा गर्नु हुँदैन भन्ने सिकेकै आधारमा उनीहरूको मानसिकतामा पुरुषहरू नियन्त्रण नभएका जंगली प्राणीहरू हुन् भन्ने तथ्य स्वीकार गर्न उनीहरूलाई गाह्रो पर्दैन । हामी केटीहरूलाई लज्जित हुन सिकाउँछौं ­ खुट्टा जोडेर राख, आफूलाई छोप । हामी उनीहरूलाई महिला भएर जन्मिनु नै दोष हो भन्ने विश्वास दिलाउँछौं । त्यही भएर त केटीहरू पछि त्यस्ता महिलामा परिवर्तित हुन्छन् जसका कुनै इच्छाहरू नै बाँकी रहँदैनन् जो मौन हुन्छन् र मनमा लागेको भन्न सक्दैनन् ।
म अहिले बाल्यकालमा मलाई थोपरिएका लैंगिक धारणा बिर्सन खोज्दैछु । तर, अझै पनि लैंगिक अपेक्षासामु आफूलाई कमजोर अनुभव गर्छु । कुनै समय विश्वविद्यालयमा पढाउँदा मलाई निकै चिन्ता हुने गथ्र्यो । पढाउने विषयमा मलाई कहिल्यै चिन्ता हुँदैनथ्यो किनकि म निकै तयारी गरेर पढाउन जान्थेँ । तर, कुन लुगा लगाउने भन्ने चिन्ताले मलाई व्याकुल पाथ्र्र्योे किनकि म चाहन्थेँ, मलाई गम्भीरताका साथ लिइयोस् । मलाई थाहा थियो, एउटी महिला भएकै कारण मैले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्नुपथ्र्यो । सचेत पनि थिएँ, म धेरै नारीसुलभ देखिएँ भने मलाई गम्भीरताका साथ लिइनेछैन । मलाई एकदमै चम्किलो लिपस्टिक र 'गर्ली' जामा लगाउन मन थियो तर मैले नलगाउने निर्णय लिएर त्यसको साटो धेरै पुरुषोचित र धेरै नराम्रो नदेखिने गरी सुट लगाएँ ।
यहाँ चलिआएको चलन नै यस्तै छ, कुनै केटा बैठकका लागि जान तयार हुँदैछ भने उसले आज के लगाउने, सुट लगाएँ भनेँ असली पुरुषजस्तो देखिन्छु कि नाहिँ भनेर सोच्नै पर्दैन । जबकि कुनै महिला बैठकका लागि तयार हुँदैछिन् भने उनले धेरैपल्ट सोच्नुपर्ने हुन्छ, यो लुगा लगाएँ भने सच्चरित्रवान् नारीजस्तो देखिन्छु कि देखिन्नँ । त्यति बेला मसँग अहिलेजस्तो आत्मविश्वास भएको भए म आफ्नै प्रतिरूप बनेर जान्थेँ, जसले विद्यार्थीमा मेरो शिक्षणको प्रभाव पनि धेरै पथ्र्यो होला ।
संस्कृतिले मानिस बनाउँदैन । मानिसले संस्कृति निर्माण गर्छ । म आफ्नो साथी ओकोलोमालाई धेरै सम्झिन्छु । उसलाई जसजसले माया गर्थे, उनीहरू सबैले उसलाई सम्झिरहने छन् । त्यो दिन उसले सही भनेको थियो जब मलाई नारीवादी भनेको थियो । हो, म नारीवादी हुँ।
वर्षौंअघि, त्यो दिन जब मैले नारीवादी शब्दको अर्थ शब्दकोशमा हेरेको थिए, त्यहाँ यस्तो लेखएको थियो, 'नारीवादी ः त्यस्तो मानिस जसले सबै लिंगको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समानतामा विश्वास राख्छ ।'
मेरो बुझाइमा त नारीवादीको सरल परिभाषा छ— यस्ता मानिस जसले लैंगिक विभेद छ भन्ने स्वीकार गर्छन् र त्यो विभेद हटाउनुपर्छ भन्ठान्छन् ।
(चर्चित नाइजेरियाली लेखक अदिचीले सन् २०१२ को डिसेम्बरमा 'टेड टक'मा गरेको कुराकानीको सम्पादित अनुवाद । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ आर्टस्मा अध्ययनरत नेहा शर्माले यसको अनुवाद गरेकी हुन् ।)
धनकुटामा 'निषेधाज्ञा' र 'आमहड्ताल' जारी 899
डेढ लाख सेवाग्राहीले अझै पाएनन् ‘स्मार्ट कार्ड’ 103
कालिकोटमा निमोनियाले एकै टोलका तीन शिशुको मृत्यु 133
विराटनगरमा व्यवसायीमाथि साङ्घातिक आक्रमण 1006